12 လ၏ခေတ် မှစ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > 12 လ၏ခေတ် မှစ(1 များအတွက်စုစုပေါင်း 12 လ၏ခေတ် မှစ ထုတ်ကုန်များ)
12 လ၏ခေတ် မှစ - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ 12 လ၏ခေတ် မှစ ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား 12 လ၏ခေတ် မှစ / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် 12 လ၏ခေတ် မှစ များထဲမှ Changchun BCHT Biotechnology Co. ။
pre-ဖြည့်ဆေးထိုးအပ် Varicella ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် Attenutated
tag ကို: ရေကျောက်ဆန့်ကျင် active ကာကွယ်ဆေးထိုး , ကျန်းမာရေကျောက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ဘာသာရပ်များ , 12 လ၏ခေတ် မှစ.
[အထူးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ] (1) ကိုအောက်ပါအခြေအနေများအတွက်လူနာများအသုံးပြုမှု restrainedly သင့်တယ်: လူတစ်ဦးဒါမှမဟုတ် person`s မိသားစုတက်ခြင်းသမိုင်း, နာတာရှည်ရောဂါခံစားနေရပြီးလူနာဝက်ရူးပြန်ရောဂါ၏သမိုင်း,...
pre-ဖြည့်ဆေးထိုးအပ် Varicella ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် Attenutated အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale 12 လ၏ခေတ် မှစ from China, Need to find cheap 12 လ၏ခေတ် မှစ as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on 12 လ၏ခေတ် မှစ produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our 12 လ၏ခေတ် မှစ, We'll reply you in fastest.